Xoogaga Muqaawamada oo Saakay la wareegay gacan ku haynta Magaalada Balad-Xaawo ee G/Gedo. | JILYAALE_ONLINE
Xoogaga Muqaawamada oo Saakay la wareegay gacan ku haynta Magaalada Balad-Xaawo ee G/Gedo.
War subaxnimadii hore naga soo gaaray Magaalada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo oo Xad lala leh dalka Kenya in Xoogaga Islaamiyiinta ay la wareegay Gacan ku haynta Magaaladaas, iyadoo ay maalmahanba halkaasi ka socdaan Dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo uu wado Barre Hiiraale.
Goobjoogayaal degmada Balad-Xaawo ku sugan ayaa sheegaya in Xoogagaasi ay la wareegeen Magaalada iyo Tuulooyinka ku xeeran, isla markaana ay Fariisin ka sameysteen Saldhiga Magaalada iyo Wadooyinka soo gala Magaalada, waxayna 4 qori ka qaateenCiidankii ay ugu imaadeen Saldhiga Magaalada.
Hase yeeshee lama oga wax iska hor’imaad ah oo ka dhacay Magaaladaasi markii ay Soo galeen Xoogaga Muqaawamada, waxaana isla magaaladaasi shalay ku sugnaa oo dhaq-dhaqaaq Ciidan iyo kulamo kalaba ka waday Barre Hiiraale, kaas oo aan illaa iyo hadda la sheegi karin halka uu qabtay.
Balse dadka ku dhaqan Magaalada ayaa ka cabsi qaba in ay halkaasi isku fara saaraan Xoogaga Muqaawamada iyo Maleeshiyada Barre Hiiraale oo Baryihii u danbeeyay Dhaq-dhaqaaq Ciidan ka waday Gobolka Gedo.
Waxaa sidoo kale Degmada Buur-dhuubo ee Gobolka Gedo ayaa looga Dhawaaqay Maamul islaami ah oo ka kooban 7 xubnood.
Nin magaciisa lagu sheegay Xasan Jibriil oo Warbaahinta u hadlay ayaa sheegay in Maamul u sameynta Degmadaasi ay timaaday ka dib markii ay soo baxeen Khilaafyo cusub oo u dhaxeeya Beelaha wada daga halkaasi.
Sida muuqata Xoogaga Muqaawamada ayaa u soo jeedsatay in ay Maamulo Islaami ah ka sameeyo qeybo ka mid ah Gobolada iyo Magaalooyinka ay Gacanta ku hayaan, waxay arintani wax ka Badaleen Xaaladihii amaan daro ee ka jiray meelaha ay ka taliyaan Islaamiyiinta kala duwan.
← Sheikh Xasan Daahir Aweys oo sheegay in Ethiopia ay qorshaynayso, sidii ay Bulshada Soomaaliyeed u kala qeybin lahayd.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay Bayaankii ay dhawaan soo saareen Culimada Musaalaxada iyo Sixida???. →